အချိန်တိုအတွင်း Electronic Top Up Card တွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မယ့် Shop.com.mm ရဲ့ Top Up/Electronic Store - Shop
အချိန်တိုအတွင်း Electronic Top Up Card တွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မယ့် Shop.com.mm ရဲ့ Top Up/Electronic Store0325
The KaungHtet August 6, 2020 9:33 am August 6, 2020
Shop.com.mm ရဲ့ Top Up/Electronic Store ဆိုတာကတော့ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်တွေကို အပြင်သွားပြီး ဝယ်စရာမလိုပဲ VISA/ Mastercard/ JCB အစရှိတဲ့ ကဒ်တွေနဲ့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Telenor, MPT, Ooredoo, MyTel နဲ့ MecTel အစရှိတဲ့ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်ပေါင်းစုံ ကို တစ်နေရာထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ လိုဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အမျိုးအစားတွေအပြင် အခြားငွေဖြည့်ကဒ်အမျိုးမျိုးကိုလဲဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေတင်မကပဲ NetFlix ငွေဖြည့်ကဒ်, Spotify ငွေဖြည့်ကဒ်, Itune ငွေဖြည့်ကဒ်, Google ငွေဖြည့်ကဒ်, Steam Walletငွေဖြည့်ကဒ်, Playstation ငွေဖြည့်ကဒ်တွေ X Box ငွေဖြည့်ကဒ် စတဲ့ ငွေဖြည့် ကဒ်တွေ အပြင် အခြား အီလက်ထရောနစ်ငွေဖြည့်ကဒ်များစွာကိုလဲ အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ငွေဖြည့်ကဒ်ဝယ်တဲ့ အခါ အချိန်ကြာမြင့်တတ်ပေမယ့် Shop မှာ ဝယ်ယူရင်တော့ ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေပြီး ချက်ချင်းရယူသုံးစွဲနိုင်မှာပါ။ ငွေဖြည့်ကဒ်တွေရဲ့ စျေးနှုန်းတွေကလဲ ပုံမှန်စျေးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်ခါတစ်လေ လျှော့စျေးတွေနဲ့လဲရောင်းချပေးတဲ့အတွက် ဝယ်ယူသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေမှာအမှန်ပါပဲ။
အွန်လိုင်းငွေဖြည့်ကဒ်တွေအသုံးပြုပြီး ငွေဖြည့်ခြင်းက အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာစေပြီး JCB ကဒ်နဲ့ ကြိုတင်ငွေပေးချေပါက ၁၀,၀၀၀ ကျပ်အနည်းဆုံး ဝယ်ယူပြီး Checkout မှာ ဘောက်ချာကုဒ် ကိုအသုံးပြုပြီး ၃,၀၀၀ ကျပ်ထပ်ဆောင်းလျှော့စျေးကိုလဲရယူနိုင်ပါသေးတယ်။
ဂိမ်းပိုင်းကို ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်လဲ Pubg Uc တွေ Stream Wallet Card တွေကိုလဲဝယ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။ အားသာချက်တစ်ခုကတော့ Uc တွေ Stream Wallet တွေဖြည့်တဲ့အခါအချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ Shop မှာတော့ အချိန်ကြာမြင့်ခြင်းမရှိပဲ ချက်ချင်းငွေပေးချေ၍ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်းကစားတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် ဝယ်ယူဖို့အသင့်တော်ဆုံးနေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အီလက်ထရောနစ်ငွေဖြည့်ကဒ် တွေကို Visa, Master, JCB card တွေနဲ့ဘယ်လို မှာယူကြမလဲ?
အီလက်ထရောနစ်ငွေဖြည့်ကဒ် တွေကို Visa, Master, JCB card တွေနဲ့ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူလိုတဲ့ အီလက်ထရောနစ်ငွေဖြည့်ကဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်ပြီးပါက Buy Now ကိုနှိပ်လျှင် Facebook Acc ဖြင် Login ဝင်ပါ။ Facebook Acc ဖြင့် ဝင်ပြီးပါက Check out page သို့ရောက်လျှင် ဝယ်ယူရန် Place Order ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ Debit/Credit ကိုနှိပ်၍ အချက်အလက်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်စွပ်ပါ။‌နောက်ဆုံး အနေနဲ့ Verification ပြုလုပ်ပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Order Confirm ဖြစ်ပြီး Order Track လုပ်ဖို့အတွက် ဖုန်းထဲသို့ SMS ဝင်လာပြီး အွန်လိုင်းငွေဖြည့်မှု ပြီးဆုံးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Top-up/Electronic Store နေရာကိုShop မှာဘယ်လိုရှာရမလဲ?
TopUp/E-Store ကို ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Shop App မှာဆိုရင် App ကိုစစဖွင့်ခြင်း အပေါ်ဆုံး Banner အောက်ရှိ Categories တွေထဲမှ TopUp/E-Storeကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Shop Website ကနေဆိုရင်တော့ Website ထဲဝင်ဝင်ခြင်း Banner အောက်မှာ TopUp/E-Store လေးကို နှိပ်၍ အလွယ်တကူဝင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Top-up/E-store မှ ငွေဖြည့်ကဒ်များ ဝယ်ယူရန်လင့်ခ် – Link
Previous Articleစိတ်လှုပ်ရှားစရာ အထူးလျှော့စျေးများစွာနဲ့ Tech WeekNext Article၁၀၀% ပစ္စည်းစစ်မှန်တဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ Official Store